Al-Shabaab oo shaacisay inay dilal ka fulisay Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Al-Shabaab oo shaacisay inay dilal ka fulisay Muqdisho
Al-Shabaab oo shaacisay inay dilal ka fulisay Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda dilal qorsheysan oo xalay iyo maanta siyaabo kala duwan uga dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, gaar ahaan degmooyinka kala ah Yaaqshiid & Dharkenley ee magaalada Muqdisho.
Al-Shabaab ayaa shaacisay in dagaalyano ka tirsan kuweeda ay baraqanimadii maanta dil ka geysteen xaafadda Carafaat ee degmada Yaaqshiid kaas oo loo geystay Xuseen Ciidgale.
Idaacadda Andaluus ee ku hadasha afka kooxda ayaa baahisay in marxuumka uu ka mid ahaa ergada wax kasoo dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda dil kale oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha degmada Dharkenley ee gobolka Banaadir, kaas oo ay sheegatay inay ku khaarijisay sarkaal ka tirsanaa ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya.
Kooxda Al-Shabaab ayaa magaca sarkaalkaasi ku sheegtay Aadan Jiira Kuulow, waxaana ay shaacisay inuu ahaa tababare, sida ay hadalka u dhigtay.
Dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan dilalkaasi ay mas’uuliyaddooda dhabarka u ridatay Al-Shabaab.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayey falal liddi ku ah amniga, kuwaas oo isugu jiro dilal, qaraxyo iyo dhac ay geysanayaan burcad hubeysan.
Si kastaba, arrimahan oo idil ayaa kusoo aadayo, ayada oo ay caasimada ka socoto doorashada kuraas ka mida baarlamaanka oo ay ka mashquulsan tahay dowladda.